LEGO Swing Ship ပရိုမိုးရှင်းသည်အွန်လိုင်းစတိုးတွင်ပြန်လည်ရောက်ရှိသည်
ပြန်လာသောကမ်းလှမ်းချက်ကိုယခုအခါတရားဝင်အွန်လိုင်းမှတိုက်ရိုက်လွှင့်သည် Lego စတိုး part ၏ စက်တင်ဘာလအပေးအယူမရ။ Swing Ship GWP သည်ဒုတိယစီးရန်ပြန်လာခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလကိုမပြုလုပ်ရသေးသူများ Lego ၀ ယ်ယူမှုများ၊ သို့မဟုတ်မလုပ်ဆောင်မီတိကျသောပရိုမိုးရှင်းတစ်ခုအတွက်စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့လျှင်ယခုလက်ဆောင်အခမဲ့ရနိုင်သော်လည်း VIP အဖွဲ့ဝင်များအတွက်သာ ၀ မ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လိမ့်မည်။
တစ်ချိန်ကအာရှ-သီးသန့် 5006746 Swing Ship Ride ကိုလက်မလွတ်ခဲ့ဖူးသူတိုင်းသည်ယခုမော်ဒယ်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်သူတို့လက်ထဲရောက်ရန်ဒုတိယအခွင့်အရေးရှိသည်။ Lego program 85 / $ 85 / € 85 of မှာယူသူများအတွက် VIP အစီအစဉ် Lego Brick နှင့် Pieces များမပါ ၀ င်သောအစုံများကသူတို့၏အမှာစာထဲသို့အခမဲ့ထည့်ပေးလိမ့်မည်။
အချိန်အကန့်အသတ်ရှိသောကမ်းလှမ်းမှုသည်ယခုတွင်ရှိသည်arted နှင့်စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်အထိ (သို့မဟုတ်စတော့ရှယ်ယာများနောက်ဆုံး) အကြောင်းအရာအားလုံးသည်ဤပရိုမိုးရှင်းအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီပြီးစျေးသတ်မှတ်ချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ခက်ခက်ခဲခဲမသွားသင့်ပါ အသစ်အစုံ st တွင်စတင်ခဲ့သည်art လ၏။ ၎င်းတွင်နှစ်စဉ်အပိုင်းအခြားများပါဝင်သည် Lego Advent Calendars၊ သင်အကြိုက်ဆုံးပေးထားပါ in stock ရှိသေးသည်.
တနည်းအားဖြင့်ဗြိတိန်ရှိစျေး ၀ ယ်သူများသည်လက်ရှိအစုံများ၏အခြားအရောင်များကို p အဖြစ်မှာယူနိုင်သည်art တစ်ဦး၏ ရုံးတင်စစ်ဆေးအစီအစဉ်ယင်းအပါအဝင် အပြာနုရောင် ၁၉၆၉ Fiat 77942.
စက်တင်ဘာလ၌အခြားအခွင့်အလမ်းများအပါအ ၀ င်အခြားပြန်လာနိုင်သောကမ်းလှမ်းချက်များစွာရှိသည် Lego Ideas စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်မှ ၄၀၄၈၇ Sailboat စွန့်စားခန်းတစ်တွဲ ကွမ်းခြံကုန်း st ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်artစက်တင်ဘာ ၂၀ တွင်
← နောက်ဆုံးပေါ် LEGO ဖြင့်ရွက်လွှင့်ပါ Ideas ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရောက်ရှိရန်စီမံကိန်း
Lego Star Wars: မကြာခင်မှာရောက်လာမယ့် Skywalker Saga သတင်း →